कोरोना संक्रमित कहाँ कतिजना उपचाररत ? के छ अवस्था? – Health Post Nepal
कोरोना संक्रमित कहाँ कतिजना उपचाररत ? के छ अवस्था?
२०७७ वैशाख १३ गते १६:५५
कोरोना आशंकामा हालसम्म ४९ हजार ३ सय ३६ नमुना परीक्षण भएको छ । जसमध्ये पिसिआरबाट ९ हजार ६ सय ६६ र र्‍यापिड टेस्टबाट ३९ हजार ६ सय ७० नुमना परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाकारी दिएको छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा १ हजार ९ सय ४५ वटा नमुना परीक्षण भएको छ । हालसम्म प्रदेश १ मा ४ हजार १ सय ६०, प्रदेश २ मा ५ हजार ४४, बागमती प्रदेशमा ७ हजार ४ सय ६७ नुमना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा ४ हजार ८ सय ७१, प्रदेश ५ मा २ हजार ९ सय ५०, कर्णाली ४ हजार ९ सय ७४ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १० हजार २ सय ४ नमुना परीक्षण भएको छ ।
हालसम्म देशभर १४ हजार ७ सय ३१ क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १ सय ३१ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ मा ७ हजार ९ सय ५६ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौ उपत्यकामा ३ र उपत्यकाबाहिर ८४ जना रहेका छन् । रेडजोनमा २ सय ९० जना रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले जनाकारी दिए ।
हालसम्म आइसोलेसनमा ८७ जना रहेका छन् । काठमाडौ उपत्यकामा ३ र उपत्यकाबाहिर ८४ जना रहेका छन् । रेडजोनमा २ सय ९० जना रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले जनाकारी दिए ।
नेपालमा हालसम्म ४९ संक्रमित संख्या पुगेको छ भने १२ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । ३७ जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् । धनगढीमा १, विरगञ्जमा ५, भरतपुरमा १, विराटनगरमा ३० जना उपचारको क्रममा रहेका छन् । सबैको स्वास्थ्य अवस्था समान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।